Su'aalaha La Weydiiyo - Sichuan Aixiang Technology Co., ltd.
1.Ma leedahay cabbirka aqalka dhirta lagu koriyo ee caadiga ah? Ma haysaa buugga wax soo saarka?
Waxaan haynaa buugga, waxaad kala soo bixi kartaa boggayaga.
Aqalka dhirta lagu koriyo waa badeecad habeysan, waxaan kuu qorsheyn karnaa iyadoo loo eegayo cabirka dhulkaaga iyo waxyaabaha looga baahan yahay, sidoo kale waxaan leenahay xoogaa cabir cabir caadi ah Wixii macluumaad dheeraad ah, pls na soo weydii.
2.Sidee looga helaa qiimeyn shirkaddaada?
Haddii aad sidoo kale baahi u qabto arrintan, fadlan ii soo sheeg qodobbada soo socda si aan u sameyn karno qorshe u dhigma oo aan ku soo xigano tixraacaaga.
- Baaxadda dhulka dhirta lagu koriyo: ballac & dherer
- Cimilada deegaanka xaalad-max heerkulkeeda, heerkulka minium, qoyaan. xawaaraha dabaysha ugu badan, roobka ugu badan, barafka daata iwm
- Codsi: waxa ka soo baxa gudaha
- Dhererka derbiga dhinac
Waxyaabaha -Cover: Filimka caaga ah, guddiga PC ama Glass
3.Ma heli karaa naqshadaha (Naqshadeynta naqshada)?
Fadlan noo sheeg sababta aad ugu baahan tahay naqshadaha. Hadday tahay dhisme
codsi, waxaan u baahanahay inaan ka qaadno khidmadda qaabeynta si aan u sameyno. Qaddarkan ayaa la soo celin doonaa ka dib markaad amarka bixiso.
4.Sidee loo dhigayaa amarka?
Markaad ku raacdo qorshaheena naqshadeynta iyo xigashada, ka dib waxaan kuu sameyn doonaa qaansheegta oo qandaraas ayaan kuu sameyn doonaa. Ka dib markaad bixiso deebaajiga, markaa waxaan ka bilaabi karnaa amarka halkaas.
5.Waa maxay shuruudaha bixintaada?
T / T, iyo L / C labaduba waa ok, 50% deebaaji, iyo 50% bixinta dheelitirka oo labixiyay kahor dhalmada (Waxaad sidoo kale kireysan kartaa qeybta seddexaad si aad noogu timaado shirkadeena si loo hubiyo qalabka kahor intaan la keenin)
6.Sidee loo dhisaa aqalka dhirta lagu koriyo? Ma haysaa fiidiyow ama Buugga Rakibaadda?
Waxaan haynaa tilmaamo rakibid iyo sawirro rakibid ah, oo loo soo diri doono adiga ka dib marka lagu koriyo dhammaado.
7.Ma leedahay koox rakibo? Ma u imaan karaan bartayada si ay u caawiyaan?
Waxaan haynaa injineero / kormeerayaal xirfad leh oo hagi kara rakibaadda, laakiin waxaad u baahan tahay inaad shaqaaleysiiso shaqaalaha maxalliga ah. Dhanka kale, waxaad ubaahantahay inaad masuul katahay tikidhada safarka ee injineerada, hoyga, cuntada iyo mushaarka maalinlaha ah. Haddii aad leedahay koox xirfad-yaqaan ah oo ku rakibidda maxalliga ah, waxaan kuu soo bandhigi doonnaa sawirka rakibidda. Markaad su'aalo qabtid, wicitaankaaga iyo fiidiyowgaaga waa la soo dhaweynayaa waqti kasta.
8. Ma haysan karaa weelka si aan u keydiyo?
Haa, waad iibsan kartaa weelka haddii aad u baahato